(S) oo doonaysa in jagadii uu Kaplan ka tagay uu la wareego - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
sawir: Mattias Persson/Sveriges Radio
(S) oo doonaysa in jagadii uu Kaplan ka tagay uu la wareego
S: "Waa in qof xisbigeena ka tirsan laga dhigo wasiirka guryeenta"
La daabacay onsdag 11 maj 2016 kl 13.00
Siyaasiyiin ka tirsan xisbiga Socialdemokraterna ayaa qaba in jagada u baneeyay wasiirkii hore ee guriyeeynta, Mehmet Kaplan oo xubin ka ah xisbiga Miljöpartiet, lugu wareejiyo siyaasi ka tirsan xisbiga Socialdemokraterna.
-Fikirkaygu wuxuu yahay in qof xubin ka ah Socialdemokraterna loo dhiibo jagadii uu banneeyay wasiirka guriyeenta. Waana fikir aannu ka mideey-sannahey dhammaan xubnaha ururka ee xisbiga Socialdemokraterna oo magaciisa loo soo gaabiyo SSU, sida uu sheegay Philip Botström, ahna hoggaamiyaha ururka dhallinyarada ee socialdemokraterna.
Fikradan ayey Marita Ulvskog oo wasiirada rayidka ka ahaan jirtay dawladdii hore ee sociaalka, hadda na xubin ka ah barlamaanka EU, la wadaagtaa SSU.
-Waa in uu socialdemokraterna la wareego jagadaas, waa hawl adag, khaasatan guryo l´aanta ka jirta waddanka iyo qaxootiga faraha badan ee Iswiidhan yimid. Laga yaabee in aaney dawladdii cusbeeyd 2014:kii la soconin hawlaha culus ee wasaaradda guriyeeynta, sida ay sheegtay Ulvskog.
Ra´iissal-wasaare Stefan Löfven ayaa todobaadkii hore cadeeyay in uu dawladda dib u dhisi doono bisha aanu ku jirno inta lagu gudaha jiro. Tallaabadaasina oo ka dambeeysay dhibaatooyinka la soo gudboonaadey xisbiga Miljöpartiet, halka ay wasiiradda deegaanka, isla-markaana ka mid ahayd labada hoggaamiye ee xisbiga (Mp), Åsa Romson, ay jagooyinkaa iska casishay, kolkiishaqadeedi iska casishay todobaadkii hore.
Dhowr qof oo ka tirsan xisbiga socialdemokraterna ay l´aanta Ekot la hadashay ayaa u jeeda in jagadii u Mehmet Kaplan ka tagay lugu bedelo qof ka tirsan socialdemokraterna, madama ay guryo l´aanta haysata waddanka noqotay mushkulad weyn, una baahan in si degdeg ah loo xalliyo.